warkii.com » Kangana Ranaut oo maanta la kulmi doonta gudoomiyaha gobolka Maharashtra Raj Bhavan, Heerkaan indha adeeg ayee kugaartay!!
Kangana Ranaut oo maanta la kulmi doonta gudoomiyaha gobolka Maharashtra Raj Bhavan, Heerkaan indha adeeg ayee kugaartay!!
Kangana Ranaut ayaa axada maanta ah la kulmi doonta dudoomiyaha gobolka Maharashtra koshyeri Raj Bhavan. Sarkaal katirsan Raj Bhavan ayaa yiri “gudoomiyaha gobolka ayaa u qabtay balan ah 4:30 galabnimo axada”. Ka dib markii BMC ay burburiyeen qaybo ka mid ah atariishada Bandra bungalow khamiistii,
gudoomiyaha ayaa muujiyay inuu ka xun yahay degdegga ay muujiyeen Shiv Sena iyo hey.ada BMC. TOI ayaa soo warisay jimcihii in Koshyari oo u yeeray la taliyaha guud ee wasiirka Uddhav Thackeray ee lagumagacaabo ajay mehta,si uu ugala hadlo xaalada ka dhalatay hadalada Kangana Ranaut iyo burburinta qaybo ka mid ah bungalow. Ranaut, oo sida Koshyari ah, waxay ka timid Himachal Pradesh, waxay qaadatay CM Thackeray waxayna ku doodeysaa inaysan jirin wax sharci darro ah oo ku saabsan burburinta kudhacday,
halka BMC ay sheegatay in qaab dhismeedka intiisa badan uu ahaa mid ku xadgudbay xeerarka bulshada. Dhibaato ayaa ku bilaabatay Ranaut ka dib markii ay dhaleeceysay booliska Mumbai oo ay isbarbar dhigtay Mumbai iyo Pakistan markee qabsanayeen-Kashmir, Sena MP Sanjay Raut iyo wasiiru dowlaha arrimaha gudaha Anil Deshmukh ayaa usoo jawaaabay kangana. iyagoo leh haddii Mumbai aysan nabad ahayn, waa inay iska tagtaa.
Deshmukh ayaa sheegtay inaysan xaq u lahayn inay halkaan ku noolaato. Inkastoo Sharad Pawar uu tan iyo markii uu yiri Ranaut hadaladiisa ay ahayd in la iska indhatiro oo la cadeeyo in ficilka ay qaadeen BMC oo aysan aheyn dowlada gobolka, BJP’s Devendra Fadnavis ayaa u soo baxday inay taageerto atariishada marka laga reebo faallooyinka ay ka bixisay PoK.